Muxuu Salka Ku Hayaa Socdaalka Mukhtaar Rooboow Ee Magaalada Baydhabo?.
Tuesday September 12, 2017 - 17:51:47 in Wararka by Super Admin
Mas'uuliyiinta maamulka isku magacaabay 'Koonfur Galbeed' ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in Mukhtaar Roobow oo Abuu Mansuur ku magac dheer uu booqan doono magaalooyinka Xudur iyo Baydhabo oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Xabashida Itoo
Mas'uuliyiinta maamulka isku magacaabay 'Koonfur Galbeed' ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in Mukhtaar Roobow oo Abuu Mansuur ku magac dheer uu booqan doono magaalooyinka Xudur iyo Baydhabo oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Xabashida Itoobiya.
Magaalada Baydhabo waxaa lagu diyaariyay dumar iyo odayaal dhaqameedyo daacad u ah maamulka Shariif Sakiin si ay qeyb uga noqdaan soo dhoweyn loo sameynayo Abuu Mansuur oo lafilayo in berri uu gaaro magaaladaasi.
Nuuradiin Yuusuf Abuukar oo ah Afhayeenka Koonfur Galbeed ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in loo diyaar garoobay soo dhoweynta Rooboow wuxuuna socdaalkiisa Baydhabo ku tilmaamay mid Taariikhi ah.
Xarunta ADC-da iyo madaxtooyada Shariif Sakiin ayaa lagu dhejiyay sawirrada Abuu Mansuur arrinkaas oo saraakiisha ‘Koonfur Galbeed’ geliyay dareen ah in Ninkan mustaqbalka madax looga dhigi doono maamulka Itoobiya raacsan ee kajira deegaanno katirsan Bay iyo Bakool.
Abuu Mansuur oo bishii Augst ee lasoo dhaafay isku dhiibay ciidamada Itoobiya kadibna loo gudbiyay magaalada Muqdisho ayaa durbadiiba si dardar leh kusoo galay siyaasadda arrinkaas oo banaanka soo dhigaya in uu jiray isku xir hore uu udhaxeeyay isaga iyo dhinacyada uu isku dhiibay.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ay soo dhammaadeen kulamo muhiim lagu sheegay oo lagu gorfaynayay mustaqbalka siyaasadeed ee Mukhtaar Rooboow, kulamadaas oo ka dhacay Muqdisho waxaa ku lug lahaa saraakiil ajaanib ah iyo mas’uuliyiin katirsan DF-ka.
Abuu Mansuur marnaba lama gelin wax ciriiri ah tan iyo markii uu isdhiibay mafaaruqin xafiisyada dowladda Federaalka iyo xarumaha sirdoonka magaalada Muqdisho halkaas oo uu kulamo kula qaadanayay saraakiil caddaan ah iyo jawaasiis katirsan DF-ka, dhammaan kulamadaas waxaa lagu gorfaynayay kaalinta uu Roobow ka qaadan karo dagaalka 10 sana jirsaday ee AMISOM kula jirto Al Shabaab.
Marka uu gaaro Baydhabo ayaa lafilayaa in uu ugasii gudbo dhanka magaalada Xudur halkaas oo ay ku suganyihiin maleeshiyaad isaga daacad u ah iyo ciidamo Itoobiyaan ah.
Mas’uul katirsan maamulka Shariif Sakiin ayaa socdaalka Roobow ee Baydhabo ku tilmaamay mid Taariikhi ah, wuxuu sheegay in Abuu Mansuur oo Baydhabo ka baxay bishii Feberaayo sanaddii 2012 xilligaas oo ciidamada Itoobiya magaalada qabsadeen haddana uu dib ugusoo laabtay magaalada isagoo ka tanaasulay Mabda’ii Jihaadiga ee uu la ciroobay!.
Saraakiisha Soomaalida dabadhilifyada ah ee Baydhabo ku sugan waxay guul u arkaa tanaasulka Rooboow iyo in uu dhinac kasoo ciriirsado safka xabashida Itoobiya!.
illaa iyo hadda si dhab ah looma oga shaqada loo dhiibi doono Mukhtaar Rooboow balse waxay ubadantahay in uu hoggaamin doono maleeshiyaad magac cusub loo bixiyay oo dagaal ku furi doono maamullada islaamiga ah ee kajira gobollada Bay iyo Bakool.
Cabdi Fataax Geesey oo ah xildhibaan katirsan Baarlamaanka DF-ka horayna usoo noqday guddoomiyaha gobolka Bay ayaa warbaahinta u sheegay in Abuu Mansuur uu qeyb ka noqon doono isbedel dhanka hoggaanka ah oo lagu sameyn doono maamulka ‘Koonfur Galbeed’.
R/wasaaraha DF-ka ayaa bishii lasoo dhaafay sheegay in Abuu Mansuur ay dhanka ammaanka uga faa’iideysan doonaan islamarkaana uu qeyb ka noqon doono dagaalka lagula jiro Xarakada SHM.
Abuu Mansuur ma noqon doono Ninkii Ugu Horreeyay Ee Safka Jihaadka inta ka taga dhanka cadowga lasoo saftay balse wuxuu noqon doono siyaasigii ugu horreeyay ee safka Jihaadka ka tagay oo islamarkiiba xil sare ka qabta maamullada shisheeyaha ku xiran ee Soomaaliya ka jira.
Shaki Kuma Jiro in Al Shabaab iyo Culimada Soomaalida qaar kamid ah ay Gaalnimo ku xukumi doonaan Rooboow Haddii uu lasoo safto Itoobiya iyo xulufadeeda AMISOM, Abuu Mansuur qudhiisa ayaa murtadiin ugu yeeri jiray madaxda dowladda Federaalka iyo maamullada la shaqeeya balse xukunkii uu ridi jiray ayaa isaga dib ugusoo noqon doona.